[Friday, September 1st, 17] :: Maxkamadda sare ee Kenya oo laashay doorashadii uu ku guuleystay Kenyatta
Nairobi (RH) Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta go’aan ay soo saartay ku laashay doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Guddoomiyaha maxkamadda sare David Maraga ayaa sheegay in ay ogaadeen in wax isdabomarinno badan ay dhaceen, wuxuuna amray in 60 maalmood gudahood lagu qabto doorasho xalaal ah.
Laakiin mucaaradka ayaa sheegay in la jabsaday hannaankii combiyutarada laguna shubtay doorashada. dacwadii isbaheesiga mucaaraadka ay u gudbiyeen toddobaadkii horre oo ay dhageesaneysay taasoo ahayd mucaaradka oo diiday natiijada doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Kenyatta.
Mucaaradka ayaa sheegay in doorashadaas ay ahayd mid musuqmaasuq uu hareereeyey, waxaana tan iyo markii natiijadaas ay soo baxday sii xoogeesanayey kala qeybsanaanta ka jirta waddanka Kenya.
Waxaa kaloo Internetka ka billowday olole lagu doonayo in lagu kala qeybiyo dadka waddanka Kenya.
Kenyatta ayaa helay codadkii la tiriyey ee doorashada 54% balse mucaaradka ayaa ka biyo diiday, iyagoo sheegay in lagu shubtay, waxaana ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in ku kaceen qiyaano qaran.
Markii lagu dhawaaqay natiijada waxaa qeybo ka mid ah Kenya ka dhacay khalalaaso, in kastoo markii dambe la dareemayey in xaaladda ay caaddi ku soo laabaneyso.
Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha talada Haya Uhuru Kenyatta uu ku guulaystay doorashada isaga oo ka horreeyay Raila Odinga 1.4 milyan oo cod.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa go’aan ku gaartay in doorashada madaxweynaha ee Kenya in lagu qaban doono muddo laba bilood gudahood iyo in natiijadii ka soo baxday doorashadii uu ku guuleystay Kenyatta ay waxbo kama jiraan tahay.
Laakiin qaar ka mid ah qareenadii u doodayay madaxweyne Uhuru Kenayatta ayaa sheegay inaysan ku qancin go’aanka maxkamadda sare.
Waxaa dabaaldegyo billaabay taageerayaasha mucaaradka, sida ay warbaahinta Kenya ku warrantay.
Kenya ayaa leh taarikh dheer oo ah la tacaalida khalaasooyinka doorashooyinka kuwaasoo dhacay sannadihii 1992-dii, 1997-dii iyo tii ugu darneed ee 2007-dii oo in ka badan 1,500 qof ay ku dhinteen tiro intaas ka badanna ay ku barakaceyn.
Xaaladda Kenya ayaa ka dartay markii baraha bulshada la soo dhigay Kenya oo kala qeybsan waxaana qeyb loo bixiyey qeybta bartamaha halka qeybta kalena loo bixiyey qeybta shacabka.
Afhayeenka xukuumadda Kenya ayaa dadka arrimahaas wada u sheegay in ay u guuraan Soomaaliya.
“Haddii aan ka eego arrinta xaqa uu lee yahay in uu qofkasta uu aragtidiisa dhiibto waxa ay xitaa u guuri karaan Soomaaliya halkaas ayaa la helaa dowlado kala duwan oo badan iyo madax siyaasadeed oo dhexdooda tartamaya, dowladnimo waa in aan marnaba laga eegin danaha siyaasadeed ee shakhsiyadeed, waa in aad muhiimada kowaad siisaan waddankiina”ayuu yiri.
Dadka odorasa arrimaha Kenya ayaa sheegaya in haddii ay sii socoto olalaha lagu doonayo in lagu kala qeybiyo Kenya in baahi karto oo ay dalka khatargalin karto, taasoo ah in khariidada dadka Kenya ay ku mideesan yihiin ay tahay mid muujineysa in dadka aany mideysneen.